Akpa akpa-akpụkpọ anụ - akpụkpọ anụ, uwe, gbakwunye, n'elu ubu, egwuregwu, maka akpụkpọ ụkwụ
Akpa akpa - 44 foto nke akpa akpa nwanyi na ihe ha ga-eji?
Akpa aka nwanyi nke oge a abughi nani ihe eji enyere gi aka, kamakwa onye inyeaka nwere ike inye gi ohere ibu ihe nile di mkpa. Na nhọrọ dịgasị iche iche nke ụdị, stylists na-ahọrọ ngwọta zuru ụwa ọnụ nke na-agbaso ihe ọ bụla na ọnọdụ. Otu n'ime ụdị ndị ahụ bụ akpa akpa.
Akpa akpa 2018
Na nchịkọta ikpeazụ, ndị na-emepụta nlezianya na-elebara ngwa a anya. Ejiri ihe dị iche iche mee ihe ngosi dị iche iche, a na-agbakwunye ya na ngwa ngwa na ihe ndozi magburu onwe ya ma ọ bụ gbanwee ya na ụdị minimalism. Uru nke ụdị a bụ ọdịdị ya, ihe ngosi dị mma, mkpirisi ndị na-adịghị mma na-adọrọ mmasị mgbe nile. Otú ọ dị, e nwere ihe dị mkpa - ọ na-esi ike ịrụ ihe. N'agbanyegh i ot 'ui si eji nlezianya na-eme ihe i nwere, ha ka na-ekesa chaotically n'ime ha. Ma, ka anyị hụ ihe ngwọta kachasị mma:
Akpa akpa n'elu ubu . Ihe kachasị mfe maka ụdị ọrụ ị na-arụ kwa ụbọchị bụ ụdị ndị nwere ogologo oge, nke ị nwere ike iyi uwe na ụdị nke obe . Ọtụtụ mgbe, eriri ahụ nwere ike gbanwee, ịme nhọrọ dịgasị iche.
Ụdị egwuregwu . Ọ bụghị oge mbụ a na-ewere dị ka azụ azụ azụ textile siri ike, bụ nke ọ na-adaba na sneakers n'ogige atụrụ na ụdị maka ọzụzụ. Nhọrọ a bara uru maka ụta kwa ụbọchị, karịsịa na agba ma ọ bụ nke e biri ebi.
Usoro nhazi . Jiri nlezianya na-agbaso akara nke ngwa ngwa aka mara mma na obere eriri ma ọ bụ akaghị. Ụdị dị otú ahụ nwere obere ụdị ma na-ejikọta ya na nkume na-egbuke egbuke, akpụkpọ anụ, ihe ndị dị mma, nke dị mkpa maka ụta mara mma dị ka ihe ọzọ na- ejigide .
Eke azu . A na-enyekwa ngwa ngwa na-emepụta ihe maka ime uwe n'úkwù. Agbanye belt ga-abụ nke ọma nkwupụta nke silhouette nwanyị, na onye na-enye aka nnyemaaka ga-aka ya aka, ma ga-adị mgbe ahụ.
Ụdị nke frameless na-ewu ewu na-ewu ewu na nchịkọta nke ngwaahịa. Ndị Nna-ukwu na-enye obere akpa na ejiji. Enwere ike iji ụdị nke buru ibu na ụta kwa ụbọchị na iji zuru ike n'akụkụ osimiri. A obere usoro ga-abụ a mma gbakwunye na ịhụnanya ịhụnanya oyiyi. A na-ekpu akpa akpa uwe ma site na oyi na okpomọkụ. Ndị na-emepụta ihe na-eji eriri na nko. Jiri nlezianya na ịchọpụta ihe ndị e ji eme ihe. A na-ejikarị ejiji na-emepụta ihe na - eme ka a ghara ịchọta ya - braids, arans, leaves, bumps, ornaments and stuff.
Uwe akpa akpa
E gosipụtara ọdịdị mbụ nke ejiji a site na textiles dị ala. Aha nke onye ngwa ahụ si na ákwà mkpuchi maka nchekwa maka nri na ọka. Taa, ndị na-emepụta ihe gbanwere ọdịdị nke oge a, ma ọ na-ejikarị ejiji, linen, jute. Ngwá ọrụ nke textiles bụ nkwado ya ruo nkwụsị. Na mgbakwunye na beads, stones, chains and straps, embroidery na-anọkarị ebe a. Nhọrọ kachasị mma bụ ụdị ihe eji eme ihe dị iche iche. Ndị kachasị ewu ewu bụ ngwaahịa ndị a:
Denim . A na-ewere nhọrọ a dị irè ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya. Ụdị ndị yiri nke ọma bụ ihe dị mma maka sọks kpụ ọkụ n'ọnụ kwa ụbọchị.
Site na velvet . Nkịtị mgbede mara mma ga-agbakwunye ihe oyiyi nke ọkaibe na mmetụ nke okomoko. Nhọrọ a ga-abụ ihe ngwọta dị mma na ụta mgbede.
Nke owu . A na-eji ụdị nhọrọ dịgasị iche iche egosiputa ụdị akwa ákwà. O nwere ike ịbụ nhọrọ na-agụghị anụ ma ọ bụ ụdị ejiji ma ọ bụ ụdị ejiji maka ngwa ngwa osimiri na sọks obodo.
Ọ bụrụ na ị họrọ ụdị ihe nlereanya dịka ngwa ngwa maka ụbọchị ọ bụla, ṅaa ntị na ngwaahịa nke suede. Egwuregwu dị nro, nke dị mma, ga-emesi ike na nkwanye ùgwù nke ọdịdị gị. Iji gosipụta ụdị akpa azụ, ndị na-emepụta gbakwunye ntọala siri ike nke udi ma ọ bụ square. Otú ọ dị, akpa akpa akpa akpa enweghị ike. Uche a dị mkpa ma na obere etu obere ụdị ma na-anọkarị na-anọchite anya ya. Ebucha na-emepụta nri na-arụ ọrụ fringe ma ọ bụ ahịhịa. N'akụkụ a, àgwà ọma na-ekpo ọkụ na-adọrọ mmasị.
Akpụkpọ anụ akpa akpa
Nhọrọ zuru oke maka ihe oyiyi na ụdị ọ bụla bụ ngwa ngwa akpụkpọ anụ. A na-eji akpa akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ mgbe nile, nke na-eme ka a mara mma. Ka ọ dị ugbu a, ndị na-emepụta ngwaahịa na-enye ngwaahịa sitere na ihe dị nro ma dị egwu. Otú ọ dị, stylists na-akwado ịhọrọ akpa-akpa nke ezigbo akpụkpọ anụ. Ihe ngwọta a na-enye ogologo oge na nke a pụrụ ịdabere na ya. Ekike mara mma nwere ike ịdị mma ma ọ bụ ịnwe akwa mkpuchi na-egbukepụ egbukepụ nke ga-adọta uche, usoro nkedo, ihe nkedo ma ọ bụ ihe eji eme ihe n'okpuru akpụkpọ anụ.
Eke akpa akpa
Na ahịa nke oge a, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ dị mma, na-echebara mmasị nke onwe gị na njirimara ụdị nke ọ bụla na nchịkọta ụlọ ọrụ mmepụta ngwaahịa na ụdị ejiji. Ụdị ndị a na-agbaso mgbe nile na-arụ ọrụ n'ihu, na-enweta nkwanye ùgwù n'ihi akwa mma nke ihe na ngwa, echiche echiche mbụ. Ka anyị chọpụta ụdị ngwa ngwa ndị kachasị ewu ewu:
Igbe dị ka akpa Muun . Ihe nlereanya si na ika a bụ n'ezie pụrụ iche. Ụfọdụ na-ezo aka na ya dịka nkata. Ndị na-emepụta akara nke akpa ahụ dị ka akpa. Nke bụ eziokwu bụ na ime ihe dị n'ime nwere ụdị dị nro na ụdọ, ma a na-eji ya ma ọ bụ nke a kpụchara ya na ya.
Ụdị akpa nke akpa Gucci . Ihe kachasị amasị oge ikpeazụ bụ akpa n'aka otu onye Italian mara mma. Ndị na-emepụta ihe na-enye ụdị nhọrọ dịgasị iche iche, eriri ọnụ na ụrọ. Otú ọ dị, ihe kachasị ewu ewu bụ obere akpa akpa nke akpụkpọ anụ na-ejighị aka.
Moschino . Na nchịkọta nke ika a, e nwere nhọrọ nke ụdị ịcha mma ọ bụla. N'ebe a, ị ga-achọta ihe ngwọta kachasị mma maka ndị inyom na-azụ ahịa na ndị ntorobịa . A sị ka e kwuwe, akpa Moschino bụ agba nke na-egbuke egbuke.
Ihe dị iche n'etiti ngwa ngwa nke ika a si na ngwaahịa ndị asọmpi bụ ngwọta dịgasị iche iche. Bag-akpa Furla ga-abụ ihe nzere na-egbuke egbuke na mbido gị. A sị ka e kwuwe, na nchịkọta ejiji, enwere na-acha egbuke egbuke ma na-acha ọcha, na-acha ọcha pastel na-acha ọcha ma na-adị mma monochrome na kpochapụwo chades na akwụkwọ mma edo edo - aha aha.
N'ebe a kachasị mma nke ngwa ndị a si n'aka Italian, ọ dịghị onye nwere obi abụọ. Otú ọ dị, ndị na-emepụta anaghị akwụsị ịma mma fashionistas na ejiji ejiji ejiji. N'ihe ngosi kachasị elu, e gosipụtara ngwọta kachasị elu - akpa akpa akpa maka ụmụ nwanyị na-acha ọcha, na-acha ọcha na-acha odo odo, ọbara ọbara, na-acha anụnụ anụnụ na agba ndị ọzọ maka ndị na-eto eto ndị ntorobịa. Nhazi ahụ nwere ike iche iche. Ndị na-eji ejiji eme ihe na-eji ma ihe nlereanya na-eme ihe n'ụdị pyramid dị nro, na mbipute mbụ ahụ na-agbatị "nti".
Ndị na-ahọrọ ịma mma na ịdị mma na ụta ha kwa ụbọchị bụ naanị na ị ga-aṅa ntị na ngwa si na Italian brand Hess. Nhazi nke ụdị ndị a ga-ekwusi ike mgbe niile, ma ị gaghị anọ na ndò nke ìgwè mmadụ ahụ. A sị ka e kwuwe, akpa akpa akpa akpa - ọ bụghị naanị onye nnyemaaka dị mma, kama ọ bụ ihe mara mma. N'afọ a, àgwà ndị kacha ewu ewu na nchịkọta nke ika ahụ bụ ọbara ọbara na-acha uhie uhie ma na-anọpụ iche na monochrome powdery.
Adidas akpa akpa
Ndị egwuregwu na ndị inyom ejiji na-achọ nkasi obi na ihe bara uru na ụta kwa ụbọchị ga-achọta ngwọta dị mma maka onwe ha na nchịkọta egwuregwu ndị Germany. Ngwadozu textile baggy backpacks ga-aghọ onye a pụrụ ịdabere na ya n'oge ụtụtụ na-agba ọsọ, ọzụzụ na ụlọ nzukọ, na-aga na ọdịdị ma ọ bụ obodo. A na-enye akpa akpa akpa egwuregwu ma na agba agba monochrome zuru ụwa ọnụ, nakwa na ihe eji ebipụta ya na floral, geometric na nkịtị motivifs.
Ngwa dị otú a nke ọma dị iche iche na ọtụtụ ihe ndị uwe ejiji ụmụ nwanyị. Ụdị na-abụghị ụdị nke akpa ahụ ga-eme ka nlezianya ndetu nke uwe ịzụ ahịa dị nro. Ndị na-agba ịnyịnya na ndị na-agba chaa chaa ga-agbakwụnye mmụcha na ịlụ nwanyị. Uwe eji mara mma ma na-agbada n'oche ya na ejiji na-eme ka obi dịkwuo ala. Otú ọ dị, stylists mesiri ike na maka oyiyi ọ bụla ọ dị mkpa ịchọta ụdị "onwe". Dịka ọmụmaatụ, anaghị eyi uwe dị iche iche na azụ ahịa. Ka anyị chọpụta ihe ị ga-eyi akpa maka ụmụ nwanyị:
Na kezhuvalny ụta . N'iji ejiji kwa ụbọchị, ị nwere ike ịhọrọ mgbakwunye na textile - jeans, burlap, corduroy, owu na ọbụna velvet. A na-ahapụ ngwaahịa ndị na-acha uhie uhie n'àgwà ahụ ma jiri akwa uwe ma ọ bụ uwe mwụda.
Na ihe oyiyi agwakọta . Ụdị ụta ndị ahụ enweghị njedebe siri ike. Otú ọ dị, a gaghị etinye akwa akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ, ma ọ bụ akwa pensụl na sweetshock na rhinestones a magburu onwe ya, nkume na ihe ọ bụla ọzọ na-egbuke egbuke na ngwa.
N'okpuru njikọ siri ike . Ịzụ ahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla dị mma ịhọrọ ụdị akpụkpọ anụ. Ma n'otu oge ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka na akụkụ ahụ bara uru.
Na nchịkọta ejiji a onye ọchịchị dị iche iche na-enye ụdị ụdị nke dị mma. Ụdị kachasị ọhụrụ nwere ọdịdị buru ibu, nke nwere ike imechi ahụ ahụ site na mkpịsị ụkwụ nke apata ụkwụ. Ụdị textile a zuru oke maka osimiri ma ọ bụ ụta obodo. Ụdị nchịkwa dị mkpa maka ọzụzụ. Akpa akpa akpa maka akpụkpọ ụkwụ ga-azọpụta gị na mkpa ịzụta ihe ndị ọzọ maka uwe, n'ihi na nha ya ga-enyere aka tinye ihe niile ahụ. Ngwaahịa nke akpụkpọ anụ ma ọ bụ ndị na-edozi anya ga-adọrọ mmasị mgbe nile. Nhọrọ a nwere ihe ịga nke ọma maka mmepụta ihe na iche iche.
Obere akpa akpa
Ụdị laconic dị mma kama ọ bụ n'àgwà nke ihe eji achọ mma. Akpa akpa akpa ụmụ nwanyị bụ àgwà maka naanị ihe dị mkpa, dịka ọmụmaatụ, igodo, lipstick, ekwentị mkpanaaka. Ọtụtụ mgbe, a na-egbu ụdị ihe ndị a na ihe mara mma na nke mara mma na nke rhinestones, lace, beads, sequins na ihe ịchọ mma ndị ọzọ. Ngwa ndị dị otú a ga-eme ka ihe oyiyi ma ọ bụ nchikota nke mbubata mezuo n'ụzọ. Ngwaahịa nke akpụkpọ anụ ma ọ bụ edozi na-enweghị ihe ndozi na monochrome agba nwere ike iji na-adị kwa ụbọchị, ebe nkọwa dị otú ahụ nwere ike ịbụ olu na-egbuke egbuke ma ọ bụ mgbakwunye.
Umu umuaka nke nwanyi
Ngwa eji eji aji
Britney Spears na-esi ísì ụtọ
Ụmụ nwanyị na-esi ísì ụtọ
Ogwe na amethyst - nhọrọ nke foto nke mara mma yiri mgbaaka na nkume nkịtị
Umu obere nwanyi n'ubu
Akpa azu akpụkpọ anụ nke ụmụ nwanyị - ụdị ndị ntorobịa kachasị mma na obodo ukwu maka ndị inyom nke ejiji
Kedu ihe ị ga-esi na Mexico?
Kedu ka esi esi na ndakpu onwe gi?
Anyaụfụ bụ mmetụta ọjọọ
Ngwakọta mmanụ maka ihu
Egwuregwu ndị na-eme egwuregwu okpomọkụ na-adabara ụmụ nwanyị
Ahịhịa ewu - ngwa
Perennials maka ubi
Olee otú ị ga-esi mee ka di ya kwụsị ịṅụ mmanya?
Ụgha ụgha na mgbaàmà ụmụaka
Nwatakịrị ahụ mebiri egbugbere ọnụ ya - gịnị ka ọ ga-eme?
Osisi-abụba abụba - ihe kachasị mma maka oghe ala
Gluten - gini bu ya ma gini mere o ji emeru umu?